Juventus 1-1 Torino: Old Lady Oo Lagu Qabtay Bar-baro Kale Oo Lama Filaan Ah
HomeWararka CiyaarahaJuventus 1-1 Torino: Old Lady oo lagu qabtay bar-baro kale oo lama filaan ah
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Talyaaniga Andrea Belotti ayaa dhaliyay goolkiisii ​​​​ugu horeysay tan iyo bishii November si uu u diido seddexda dhibcood ee Juventus iyadoo Torino ay barbaro 1-1 ah ku gashay Allianz Stadium.
Juventus ayaa ku jirta kaalinta Afaraad ee Horyaalka iyadoo leh 47 dhibcood kadib 26 kulan oo ay ciyaartay.
Qeybtii hore ee ciyaarta madax uu dhaliyay Matthijs de Ligt lakin goolka barbaraha waxaa dhaliyay Belotti Daqiiqadii 62aad ee ciyaarta taasoo ka dhigeysa in Old Lady ay sideed dhibcood ka dambeeyaan hogaamiyayaasha Serie A ee Milan.
Belotti ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana la filayaa inuu ka tago Torino, laakiin taageerayaashu waxay u rajeynayaan wanaag haddii goolkaasi uu noqdo wax qabadkiisii ​​ugu dambeeyay ee Turin derby.
Dhanka kale, Massimiliano Allegri ayaan la dhacsanayn soo bandhigida kooxdiisa ka hor kulanka lugta hore ee wareega 16ka Champions League ee Talaadada ka dhici doona Villarreal.
Juve ayaa dharbaaxo soo gaartay ka hor inta aysan ciyaarta bilaaban iyadoo Daniele Rugani uu ku dhaawacmay is kululeyntii waxaana lagu bedelay daafaca dhexe Alex Sandro, iyadoo Luca Pellegrini uu ku soo bilowday daafaca bidix.
Juventus ayaa u safri doonta Villarreal lugta hore ee wareega 16ka Champions League Talaadada ka hor inta aysan booqan Empoli ee horyaalka Sabtida soo socota. Torino waxa ay martigelisaa Cagliari usbuuca danbe.